घरघरमै भत्ता पुर्याउन माग - राष्ट्रिय - Radio Kantipur
घरघरमै भत्ता पुर्याउन माग
स्थानीय तहले जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, एकल महिला लगायतलाई सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता बैंकमा लिने व्यवस्था गरेको छ । लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिकाका नागरिकले भने सो भत्ता घरघरै पु¥याउन माग गरेका छन् ।
गाउँपालिका केन्द्रमा रहेको बैंकबाट भत्ता वितरण गरिएपनि ग्रामीण भेगका नागरिकलाई एकदिन लगाएर भत्ता लिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ । मर्स्याङदी गाउँपालिका ९ सिम्पानीका हरिशचन्द्र थापाले वृद्धवृद्धालाई भत्ता लिन बैंकमै आउनुपर्ने बाध्यताले समस्या भएको बताए ।
‘बैंकमा खाता खोल्न आउ । खाता खोलेर लिन आउने । सवारी साधनमा हालेर ल्याउनुपर्ने बाध्यताका वृद्धवृद्धाले पाउनुपर्ने रकम भन्दा बढी खर्च हुन्छ’ उनले भने, ‘हि“डेर आउन नसक्ने भए । बोकेर ल्याउ“दा गाह्रो हुन्छ ।’
मर्स्याङदी गाउँपालिका ८ भुलभुलेका कृष्णप्रसाद अधिकारीले वृद्धवृद्धालाई घरघरै लगेर वृद्धाभत्ता दिइनुपर्ने बताए । ‘भन्नलाई सिंहदरबार घरघर आयो भन्ने । नागरिकलाई अझै केन्द्रमै बोलाएर दुःख दिन त मिलेन नि’ उनले भने, ‘हिजो बेंसीसहर जान आधा घण्टा लाग्थ्यो । आधा घण्टा छोटिएर के भो । अझैं दुःख पाउनै पर्ने ?’ महिला, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित समुदायलाई सहज हुने गरी गाउँपालिकाले सेवा सुविधा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
स्थानीय दयासागर घिमिरेले जेष्ठ नागरिकलाई हित र फाइदा हुने खालको योजना गाउँपालिकाले नल्याएको गुनासो गरे । ‘हामी बुढा भइसक्यौं । हाम्रो लागि गाउँपालिकाको काम के हो ? गाउँपालिकाका विभिन्न शाखा गाउँघर आएर काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? कि कार्यालयमै बसेर जागिर पकाउने हो ? सिंहदरबार गाउँमा आयो, घरघरमा आयो भनेको यही हो ?’ उनले गुनासो गरे ।
मर्स्याङदी गाउँपालिकाले शनिबार भुलभुलेमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा नागरिकले गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा तथा सुविधा पारदर्शी र जनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीयले गाउँपालिका भित्रका विभिन्न नदीनाला तथा खोलामा ठूला तथा साना जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको तर, रोजगारी नपाएको गुनासो गरे ।
आयोजनामा गाउँपालिकामा रहेका युवालाई रोजगारी दिन र विदेश जानबाट रोक्ने काम गर्न स्थानीयले गाउँपालिकालाई सुझाव दिए । कतिपय भूकम्प पीडितले लामो समयसम्म दोस्रो र तेस्रो किस्ता नपाएको भन्दै छिटो भन्दा छिटो उपलब्ध गराउन माग गरे । कतिपयले दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने बेलासम्म घर निर्माण गरेको हेर्न प्राविधिक नआएको गुनासो गरे । स्थानीयले कृषि, पशुका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३ सय ३० वटा कुल योजना रहेकोमा १ सय ८७ योजनाको सम्झौता भएर काम अघि बढेको बताउनुभयो । २७ वटा योजना सकिएर फस्र्यौट भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । १ सय ४३ योजना सम्झौताको चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘नागरिकको आवश्यकतालाई प्राथामिकतामा राखेर गाउँगाउँ पुगी योजना संकलन गरेका छौं ।
प्राथामिकता अनुसार योजनालाई अघि बढाएका छौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैकुरा तत्कालै, एकैदिनमा हुने कुरा भएन । हामी हरदम सहज र विकासको पक्षमा छौं, प्रयासमा छौं ।’ निजी आवास पुनःनिर्माणमा खटिएका प्राविधिक आन्दोलनमा रहेकाले समस्या भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
बजेट, कर्मचारी पुगुञ्जेल कुनैपनि काममा ढिला सुस्ती हुन नदिने र अनियमितता पनि हुन नदिने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उपाध्यक्ष होमबहादुर विश्वकर्माले गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन योजना बनाएर अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गाउँपालिकाले योजना बनाएको छ ।
कार्यान्वयनको लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीनाथ सापकोटाले गाउँपालिकाको सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिएको र यसले नागरिकलाई थप सहज भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्य स्थानीय तहले हामीले गरेका कामहरु गर्न सकेका छैनन् । हामी धेरै अघि बढेका छौं ।’
प्रकाशित:फाल्गुन १८, २०७५